Shir madaxeedka G7 oo laysku maan dhaafay kadib War-murtiyeedka shirka “Sawirro”. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Shir madaxeedka G7 oo laysku maan dhaafay kadib War-murtiyeedka shirka “Sawirro”.
Shir madaxeedka G7 oo laysku maan dhaafay kadib War-murtiyeedka shirka “Sawirro”.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump dafiray soo dhoweeyn uu horey u soo dhoweeyay war murtiyeed laga soo saaray dhammaadka shir madaxeedka wadamada G7 isagoo dalka Kanada ku eedeeyay waxa ugu ku tilmaamay “Daacad darro”.
Waxa uu sheegay in wadamada kale ay ku soo rogeen canshuur baaxad weyn dalka Mareykanka.
War murtiyeedka, oo looga hadlay “shuruuc ku saleeysan habka ganacsiga”, ayaa la gaaray xilli ay xiisad ka taagan canshuurta tariifada ee laga qaado walxaha biraha iyo qalabka biraha dhismaha ee lala soo dego.
R/wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa wacad ku maray in horey loo wado canshuuro aargoosi ah oo lagu soo rogayo waxyaabaha laga keeno dalka Mareykanka marka la gaaro 1-da bisha July ee nasoo aadan.
Isagoo ka hadlayay shirjiraa’id, waxa uu ku tilmaamay in ay ahayd “aflagaado” go’aanka Trump waxa uu ku sheegay walaacyada Amniga qaranka si uu cudur daar ugu sameeyo tariifooyinka canshuuraha ee uu kusoo rogay ganacsiga biraha ee metallic aluminum-ka.
“waa wax lag shalaayo laakiin waxa ay noqon doontaa xal la kala cadeeyo marka aan horey ugu dhaqaaqno talaabooyin aargudasho leh 1-da bisha July,” sidaasi waxaa sheegay Mr Trudeau. “dadka Kanada waa dad xushmad badan oo xaqiiqada ku taagan balse ma noqon doono kuwa lagu riixo waxyaabahaasi.” Ayuu yiri Justin Trudeau.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dhinaciisa ka hadlay arrintan ayaa hadaladiisa aad uga fogaa oo aanan kusoo darin ereyadii uu horey u jeediyay hadda kahor, labada mas’uul ayaa si fagaare ah iyo hadallo si gaar ah uu ula yeeshay ayaa Mr Trump, xafiiskiisa waxa laga soo saaray hadalkan.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay ku dhagan tahay war murtiyeedka kasukoow go’aanka madaxweyne Trump kasoo baxay.
“waxa aan taageersanahay ballanqaadyada laga sameeyay eek u jira war murtiyeedka G7,” sidaasi waxaa laga soo xigtay ilo wareed sare oo kasoo baxay dalka.
Madaxweynaha Mareykanka oo bartiisa twitter-ka soo dhigay xilli uu ku socday shir madaxeedka kale ee uu kaga qayb galayo dalka Singapore ayaa sheegay inuu isagu amray saraakiisha Mareykanka “in aysan soo dhoweeyn war murtiyeedka iyadoo uu xilligan Mareykanku dib u eegis kusameeynayo canshuuraha baabuurta uu sameeyo mareykanka”.
Waxa uu sheegay in tallaabada ay ku saleeysanayd bayaanka been abuurka ah ee shirka jiraa’id ee R/wasaare Justin Trudeau, xaqiiqadana ay tahay in Kanada ay wado sidii ay ugu soo rogi lahayd canshuur baaxad leh dadka beeraleyda ah, shaqaalaha iyo shirkadaha dalka Mareykanka “.
Isagoo ugu dambeeyntii ku tilmaamay Mr Trudeau inuu yahay qof “aan daacad ahayn oo liita “.
Mr. Trump ayaa goor hore saxiixay bayaanka war murtiyeedka ay ku heshiiyeen dhammaan wadamada ku bahoobay Ururka G7 kasukoow muranka ka taagan xagga ganacsiga.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo Caddeeyay in la Joogo Xilligii Awoodda loo soo Celin Lahaa Shacabka Soomaaliyeed
Next articleRa’isul wasaare Kheyre oo shacab iyo ciidan kula saxuurtay qeyba kamid ah Muqdisho